उदेश्य हाम्रो गाह्रो छ ! तर हिम्मत ठुलो छ: मुख्यमन्त्री गुरुङ – Samacharpati
उदेश्य हाम्रो गाह्रो छ ! तर हिम्मत ठुलो छ: मुख्यमन्त्री गुरुङ
फलेवास १३ कार्तिक । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशले राखेका लक्ष्यहरु कठिन भएपनि उच्च मनोबल सहित आफुहरु अगाडि बढिरहेको बताएका छन । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार डलर पुर्याउने, गरिवीको रेखामुनिका जनसख्या ५० प्रतिशत कमगर्ने जस्ता लक्ष्यहरु चुनौतीहरु रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए । यद्यपि विभिन्न अवास्थाहरु विश्लेषण गर्दा यी उदेश्यहरु पुरा गर्न सक्ने भएकाले ठुला आत्मविश्वास सहित प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई रहेकाे थियाे । दोविल्ला फलेवास सडक कालोपत्रे योजनाको आइतबार शिलान्यास गर्दै पर्यटन, कृषि, उद्योग र जलविद्युतको माध्यामबाट उल्लेखित उदेश्यहरु पुरा गर्न सकिने बताएका थिए । ‘दुई हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्याउने काम आकाशको तारा टिप्ने र समुंद्रको मोति जस्तै कठिन काम हो’ उनले भने ‘तर पर्यटन, कृषि, उद्योग र उर्जाको माध्यामबाट यो चीज संभव छ ।’
गत बर्ष प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य भन्दा एक प्रतिशत बढेर सात प्रतिसत पुगेको दृाष्टान्त दिदै मुख्यमन्त्री गुरुङले निकट भविष्यमा यसलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउन सकिने बताएका थिए। यो आधारमा १४ प्रतिशत रहेको गरिवीको दर सात प्रतिशतमा झार्न कठिन नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई रहेकाे थियाे । प्रदेशको औसत आयुलाई ७५ बर्ष पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्तरीय बनाइने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । पाच बर्ष भित्र प्रदेशको जिल्ला अस्पतालमा कुनै पनि प्रकारको औषधी कमी हुन नदिइने आवस्थामा पुर्याइने प्रतिवद्धता समेत उनले गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद पदम गिरि, गण्डकी प्रदेशका भोैतिक पुर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा बाताबरण मन्त्री विकास लम्सालले काम समयमा सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीयले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशले प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा क बर्गको सडक बनाउनले लक्ष्य अनुसार दोविल्ला फलेवास सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । यो लक्ष्य अनुसार ९ दशमलव ८ प्रतिशत सडक कालोपत्रे हुनेछ । यो सडकको चौडाई नाली सहितको ८ मिटरका हुनेछ । प्यासेफिक फेवा निर्माण कम्पनीले यो सडक निर्माण गर्नका लागि २६ करोडमा सम्झौता गरिसकेको छ । आउदो २ बर्ष भित्रमा काम पुरा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रोजेक्ट म्यानेजर दायराम अधिकारीका अनुसार यो सडक खण्डमा ४१ वटा हिमपाइप राखिने सम्झौता समेत भएको छ । यो बर्ष पर्वतको विभिन्न ठाउमा संघ सरकारबाट ११ र प्रदेश सरकारबाट ४० गरी ५१ वटा सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट